PU Foam Stress Balls ထုတ်လုပ်သူများ - China PU Foam Stress Balls စက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ
သားပိုက်ကောင် Wallaby ဥရောပ Pu Foam သည်ဖိအားပေးဘောလုံးဖြစ်သည်
ထုတ်ကုန်အမည်: သားပိုက်ကောင် Wallaby ဥရောပ Pu Foam
iantရာမအရွယ်အစားပျော့ပျောင်း pu စိတ်ဖိစီးမှုဘောလုံးကြီးမားသောအရွယ်အစားသံပုရာညှစ်ကစားစရာစိတ်ကြိုက်နှင့်အတူ
ကုန်ပစ္စည်းနာမည်: pu stress ball ကြီးမားသောသံပုရာ
အရွယ်အစား: 10cm * 10cm * 8cm
အရောင်: အဝါရောင်; ပန်းရောင်
ထုံးစံတရုတ် Pu အမြှုပ်ကြက်သားဆန့်ကျင်စိတ်ဖိစီးမှုဘောလုံးကို
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: pu ရေမြှုပ်ကြက်သားအားဖိအားပေးသည့်ဘောလုံး
အရွယ်အစား: 9cm * 10cm * 7cm
အရောင်းအ ၀ ယ် Jumbo kawaii ပန်းရောင်အပြာရေမြှုပ်ငါး squishy နည်းနည်း kawaii ဝေလငါးများ Anti Stress Toy
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: squishy နည်းနည်း kawaii ဝေလငါးများ Anti Stress Toy
အရွယ်အစား: 6cm * 10.5cm * 6.5cm / 8cm * 13.5cm * 8.5cm
အရောင်: ပန်းရောင်; အပြာ
မူလစာမျက်နှာကလေးများကစားရန်ကစားစရာကစားစရာကစားစရာကစားစရာချစ်စရာချစ်စရာတိရစ္ဆာန် Stress Ball PU Slow Rising Jumbo Unicorn Squishy ၏မွေးနေ့လက်ဆောင်များ
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Jumbo Unicorn Squishy
အရွယ်အစား: 7.5cm * 10cm * 14cm
အရောင်: ပန်းရောင်; အဖြူ
Eco Friendly မှထုတ်လုပ်ထားသောထုံးစံအရ squishy ကစားစရာဆန့်ကျင်ဖိအားဒဏ်ခံ PU Foam ဘောလုံး
စိတ်ဖိစီးမှုဘောလုံးသည်သင့် ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံခံနိုင်သည့်လမ်းကြောင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် (သင်ကြွက်သားများကျုံ့ပြီးညှစ်သကဲ့သို့အနားယူနေသောကြောင့်) သည်သင်၏ဉာဏချာနယ်မှအသုံးပြုသောအလွန်အကျွံအနုတ်စွမ်းအင်ကိုဖယ်ထုတ်ပေးသည်။
မကြာခင်မှာပဲအနည်းငယ်အာရုံကြောသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်ခံစားရ? သို့မဟုတ်ကျောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်ကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရသလား။ ဤမေးခွန်းများအတွက်သင်၏အဖြေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါကသင့်အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြေရှင်းနည်းရှိသည်—ဖိအားဘောလုံး!
စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် Smiley မျက်နှာ
စိတ်ဖိစီးမှုများသည့်ဘောလုံးကိုညှစ်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏လက်ကြွက်သားများပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေပြီးသင်၏ဆုပ်ကိုင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ဘောလုံးကိုသင်၏လက်ဖဝါးထဲရှိတတ်နိုင်သမျှတင်းကျပ်စွာညှစ်ပြီးသင်၏ချုပ်ကိုင်မှုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလွှတ်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ခွန်အားပြန်ရရန်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် ၁၀ ကြိမ်ပါသောသုံးစုံကိုပြုလုပ်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုဘောလုံးများသည်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရုံတင်မကဘဲ။ အဆစ်ရောင်ခြင်းနှင့် carpal tunnel syndrome ကဲ့သို့သောအခြေအနေအချို့ကိုရှောင်ရှားရန်သင့်လက်နှင့်လက်ချောင်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးသည်။ သင်၏လက်နှင့်လက်ကောက်ဝတ်ရှိကြွက်သားများသည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤအခြေအနေများသို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်လက်မောင်းပေါ်တွင်တံတောင်ဆစ်မြင့်တက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဒဏ်ရာများကြောင့်သင့်လက်၌ကြွက်သားများအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်နိုင်ပြီးကြွက်သားကျုံ့ခြင်းခံရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများသို့မဟုတ်ကုသမှုများသည်ဓာတုကုထုံးဖြင့်ကုသသောကြောင့် fistulas သို့မဟုတ် numbness ကဲ့သို့ကြွက်သားအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်သူစျေးပေါ Eco Friendly oem ထုံးစံ squishy ကစားစရာဆန့်ကျင်ဖိအားဘောလုံးကိုဘောလုံးဘောလုံး
ထုတ်လုပ်သူစျေးပေါ Eco Friendly oem ထုံးစံ squishy ကစားစရာစိတ်ဖိစီးမှုဘောလုံးကိုရေတစ်စက်လက်ဆုပ်လေ့ကျင့်ရေးဘောလုံးကို
လှည့်ပတ်လိုသောကျောင်းသားများနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဘောလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်စရာမလိုဘဲနှစ်သိမ့်မှုပေးသောလမ်းကိုပေးသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုဘောလုံးသည်လူကိုအသုံးပြုသောသူ၏အာရုံကိုတိုးစေသည်သာမကပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများ၏လက်ရှိလုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။
သုတေသနလေ့လာမှုတစ်ခုအရစိတ်ဖိစီးမှုများပြားသောဘောလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆ-္ဌမတန်းကျောင်းသားများအကြားအာရုံ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားလာခြင်းကဖိအားပေးဘောလုံးများအပေါ်သူတို့အပေါ်သက်ရောက်ခဲ့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဟုဆိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သူတို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုများသည့်ဘောလုံးများကိုသုံးနိုင်သောအခါလက်သည်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောအာရုံထွေပြားစေခြင်း၊